Kanneen Jireenya Irraa Buqqa’an Gargaarsii Nu Dhaqqabaa Hin Jiru Jedhu – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioKanneen Jireenya Irraa Buqqa’an Gargaarsii Nu Dhaqqabaa Hin Jiru Jedhu
Kanneen Jireenya Irraa Buqqa’an Gargaarsii Nu Dhaqqabaa Hin Jiru Jedhu
AMBOO — (voaafaanoromoo)—Godina Horroo Guduruu Wallagggaa Aanaa Hamuruu Ganda Guyii Teeboo jedhamutti ji’oota sadan darbaniif waan deggersi midhaan nyaataa hin taasifamneef yoo xiqqaate daa’imman 10 lubbuun isaanii darbeera jedhan jiraattotni hangi tokko.
Itti gaafatamtootni waajjira Hooggansa sodaa balaa Aanaa fi godinichaa deggersichi kan addaan cite ji’a sadiif osoon taane, ji’a lamaaf dhaabbate erga jedhan booda hooggansa ole aanutti dhimmicha beeksisanii deebii eeggataa jiraachuu himan.
Kan daa’imman du’aniiru jedhame ilaalchisee akka qabne ibsan.
Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa gama isaan sababa deggersi itti harkifateef waan maallaqni dafee hin ergamneefidha jedheerA.
Godina Horroo Guduruu Wallagggaa Aanaa Hamuruu Ganda Guyii Teeboo jedhamutti ji’oota sadan darbaniif waan deggersi midhaan nyaataa hin taasifamneef yoo xiqqaate daa’imman 10 lubbuun isaanii darbeera jedhan jiraattotni hangi tokko.
Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Oromiyaa gama isaan sababa deggersi itti harkifateef waan maallaqni dafee hin ergamneefidha jedhe
OMN ODUU OOLMAA OROMIYAA GUYYAA haaraa, Aug /19-2019